National Power News:: फेसबुकको कमेन्टमा बधाई लेख्दा किन रातो हुन्छ ? यस्तो छ रहस्य National Power News:: फेसबुकको कमेन्टमा बधाई लेख्दा किन रातो हुन्छ ? यस्तो छ रहस्य
फेसबुकको कमेन्टमा बधाई लेख्दा किन रातो हुन्छ ? यस्तो छ रहस्य
१० कार्तिक,काठमाण्डौ – फेसबुक विश्व कै सबै भन्दा ठुलो सामाजिक संजाल हो । सुरु भए देखि नै प्रयोगकर्तालाई ध्यानमा राख्दै बिभिन्न सुबिधाहरु थप्दै गएको छ । त्यसैले फेसबुकमा पोस्ट भएको कुनै पनि कुरा माथि आफ्नो प्रतिक्रिया देखाउना पनि अहिले टाइप गरि रहनु नपर्ने भएको छ । सोझै आफ्नो रोजाई अनुसारको प्रतिक्रिय भाब मार्फत देखाउना सकिन्छ जुन कुरा पहिला फेसबुकमा राखिएको थिएन । जुन सुकै पोस्टलाई पनि “ like” गर्नु पर्ने बाध्यताबाट पार लागेको छ ।
कुनै खुसि र रमाइलो कुरालाई मन पराउदा “ like” गर्दा सामान्य भयो तर कुनै दुखि बनाउने र नरमाइलो बनाउने पोस्टमा पनि ष्पिभ गर्दा भने अस्वाभाविक हुने गर्थ्यो । त्यसैले फेसबुकले यो कुराको समाधान निकाली सक्यो र हामी अहिले सबै आफ्नो भाब देखाउना यी संकेतहरु को प्रयोग गरि रहेका छौ ।
फेसबुकमा अहिले एउटा कमेन्ट एकदमै प्रयोगमा आइ रहेको छ र दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । कसैले भाग्य परिक्षण त कसैले माया र चुम्बान संकेतको रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ भने कतिले रमाइलोको लागि पनि । वास्तबमा के हो त सबै ले कमेन्ट गरि रहेको “xoxo” रु
यो एउटा फेसबुक नया प्रयोगमा आएको रंगिन एनिमेसन कमेन्ट हो, जब कुनै पनि पोस्टमा तपाईले “ह्इह्इ” टाइप गरेर कमेन्ट गर्नु हुन्छ र त्यसपछि तपाईको फेसबुकको भित्तामा रातो पान( Heart) उडेको देख्नु हुन्छ अनि xoxo रातो रंग मा परिबर्तन हुन्छ। xoxo कमेन्टले माया र चुम्बनको संकेत जनाउछ । यसरि कमेन्ट गर्दा तपाईलाई पनि रमाइलो पक्कै लागेको होला ।
xoxo संगै व्यापक रुपमा प्रयोगमा आएको अर्को कमेन्ट हो “congrats ” “congratulation” कसै लाई बधाई दिनु पर्यो भने हामी यहि कमेन्ट धेरै प्रयोग गर्छौ । जब बधाई दिनलाई यो कमेन्ट गर्नु हुन्छ कुनै उत्सब मनाए जसरि बेलुन र फूलहरु तपाईको फेसबुक भित्तामा देखा पर्दछ । अहिले नेपाली शब्द “बधाई” लेख्दा पनि यो सुबुधा फेसबुकले थपी दिएको छ र तपाई फेसबुक मार्फत नै उत्सब मनाउना पाउनु हुन्छ ।